Magaalo ku taala Denmark oo hilibka doofaarka waajib ka dhigtay - iftineducation.com
iftineducation.com – Magaalo ku taala wadanka aan dariska nahay ee Denmark ayaa waajib ka dhigtay in hilibka doofaarka laga bixiyo magaaladaas. Siyaasiyiinta degmada Randers ayaa go’aamiyay in ay waajibtahay in hilibka doofaarka laga helo iskuulada, xanaanada iyo dhaman goobaha ay dowladu cuntada ku bixiyo.
Go’aanka magaalada ayaa ka dambeeyay markii ay sheegeen in Muslimiinta halkaasi ku nool ay isbedal ku sameeyeen cuntada laga bixiyo iskuulada iwm maadaama aysan dooneyn in ay cunaan hilibka doofaarka. Waxay sheegeen in iskuulada qaarkood ay bilaabeen in ay bixiyaan cunto xalaal ah oo keliya, taasoo ay ka caroodeen dadka qaarkood.
“Fariinta aan diraynaa waa, haddii aad Muslim tahay oo aad timaado Randers waa in aadan dadka ku qasbin cuntadaada. Hilibka doofaarku waxa uu la midyahay hilibka kale” ayuu yiri Frank Noergaard oo ka tirsan golaha deegaanka isla markaana ka tirsan xisbiga cunsuriga ah ee Danish People’s Party.
Si kastaba ha ahaatee, hilibka xalaasha ah iyo cuntada uusan hilibka ku jirin ayaa wali laga bixin doonaa iskuulada iyadoo qofkii aan doofaarka cunin helayo cunto kale.